TCAS 777 1 sano 11 bilood ka hor #1162
On 777 halkaas oo ah bedelka TCAS? Waan ogahay in ay tahay inay ku taala raadiyaha. laakiin ma shaqeyn karo. Thanks
TCAS 777 1 sano 11 bilood ka hor #1163
Waxaa laga yaabaa inaanay noqon mid shaqeyn, AMA Xitaa haddii ay tahay mid xor ah. Waxaan ogahay PMDG 777 inay ku xigta xaruntii FMC, laakiin taasi waa 777 oo kaliya waxaan u duulayaa sidaa daraadeed waxaad ubaahantahay inaad u noqoto mid aad u cayiman oo tusaalaha ah ee aad isticmaalayso ....
TCAS 777 1 sano 11 bilood ka hor #1164
Marna ma dareemayo, waan helay.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.338